နှင်းဆီဖူးးလေး (စ/ဆုံး) – For You
သမီး နေမကောင်းဘူးလား”မေးရင်းနဖူးပေါ် လက်လာတင်ပါတယ် ကျမ ရမ္မက်ပြင်းထန်ချိန်မှာ ယောင်္ကျားတစ်ဦးရဲ.အထိ အတွေ.ကြောင့်ဆက်ကနဲ တုန်သွားမိတယ် ကျမခေါင်းအသာခါပြမိတယ် ။အဲဒီချိန်မှာသူက ကျမခါးကို ဆက်ကနဲပွေ.ရင်း ကျမနုတ်ခမ်းတွေကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ရမ္မက်နဲ. အားရပါးရ စုတ်ယူပါတော့တယ်…ကျမကတော့ရုန်းတာပေါ့ …သူရင်ဘတ်ကို သူမျက်နှာကို ဘယ်ညာရမ်းတာပေါ့ …ဒါပေမယ့် ကျမရဲ.တောက်လောင်နေတဲ့ရမ္မက်မီးတွေဟာ ကြာရှည်ငြင်းဆန်ခွင့်မပြုပါဘူး
…သူလက်ထဲမှာပျော့ခွေသွားရပါတယ် ….။။။သူဟာကျမ နုတ်ခမ်းသားတွေကို လျက်နေသလို သူ.လက်တွေကလဲ ကျမ ထဘီ ကို အသာချွတ်ချလိုက်ပါတယ် ။လေပြေနုရဲ.အတွေ.ကို ပေါင်တံ တွေကတစ်ဆင့်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ကျမရဲ. ပစ္စည်း မို.မို.လေးကို အသာလက်ဝါးနဲ.အုပ်ပြီးစပ်စမိုင်တာအပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေရဲ. စပ်စမိုင်ဒါကလဲ ခုနက မြင်ရ ကြားရတာတွေကြောင့်စိုရွှဲ နေပါတယ်ဒါကိုတွေ.ရတော့သူဟာ အားတက်လာပြီး စပ်စမိုင်ဒါကိုချွတ်ချလိုက်ပါတယ်စပ်စမိုင်ဒါကျွတ်သွားတာနဲ. ကျမပစ္စည်းထဲ လက်ခလယ်အသာသွင်းပြီး မွှေနောက် ထိုးဆွပေးနေတယ်ကျမရဲ.ရမ္မက်တွေ အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ. ထကြွနေချိန်မို. လက်ချောင်းဝင်လာတာကိုအရမ်းအရသာတွေ.နေမိတယ်ကျမရင်ထဲမှာ ခံစားမှုနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်ထဲဖြစ်နေတယ်ရမ္မက်မီးတောက်လောင်နေချိန်မှာ
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်(ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်)အလို ရှိနေပေမယ့် အဖေ့သူငယ်ချင်းအဖေအရွယ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိလူကြီး လူကောင်း ကြောင်သူတော်ဟာ သမီးရွယ် ကျမကို အကွက်ဆင်ပြီးဆွဲ တော့မှာမို.အော့နှလုံးနာမိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျမမငြင်းပါ ဘူး ယောင်္ကျားတွေကိုကစားချင်စိတ်ကြောင့် သူပြုသမျှနုနေမိပါတယ် ….ကျမရဲ.ရင်စေ့ အင်းကျီလေးကို စောင့်ဆွဲလိုက်တာနဲ. နှိပ်ကြယ်သီးတွေဟာ ပြုတ်ထွက်သွားလို. ကျမရဲ.ဝါဝင်းပြီးအရွယ်နဲ.မလိုက်အောင် ကြီးမားတဲ့နို.အုံကြီးတွေဟာ မနိုင်မနင်း ထိန်းထားရတဲ့ဗရာစီ ယာကို အတင်းရုန်းကန်နေပါတယ် ။
ဘရာစီယာ ချိတ်တွေကို ကုလားထိုင်ဆက်တီပေါ် ပြန်ချလိုက်ပါတယ်ခုတော့ကျမတစ်ကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်းပါဘဲသူရှေ.မှာကိုယ်ဟန်ပြမယ်တစ်ယောက်လို မျက်စိမှိတ်ပြီး ရပ်နေမိတယ် ။သူဟာကျမကိုခဏထားပြီး သူ.အဝတ်စားတွေကို အမြန်ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမ နို.တွေကို လျှာနဲ.လျက်လိုက် လက်နဲ.ချေ လိုက် ပစ္စည်းထဲနိုက်လိုက် ဖင်ကိုဆွလိုက် လှုပ်ရှားနေပါတော့တယ် ။ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီး ကျမခြေထောက်တွေကို လက်တန်းတွေပေါ်မှာချိတ်တင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ.ခေါ်င်းမြုတ်ပြီး ကျမပစ္စည်းကို ရှာထိုးပြီးကလိ ပါတော့တယ် ။။။…
အိုး.. အင့်ဟင်း ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ….. အမလေး….. အား… အား….. ရှီး……ကျမရဲ့ ပါးစပ်က ထုံးစံအတိုင်း အာမေဋိတ်တွေ မရှက်မကြောက်ဘဲ ထွက်လာရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တာရှင်… ကျမရဲ့ပစ္စည်းကို လျှာနဲ့ ကလိပေးတိုင်း ကောင်းတာပဲပေါ့………..မိန်းကလေးတွေ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အရသာပါပဲ..ကျမရဲ့ ပစ္စည်း ခေါင်းထဲက အရည်တွေလဲ ကျလာရော ငနဲ့ကြီးက မတ်တပ်ရပ်ပြီး သူ့****ကြီးကိုကျမ ပစ္စည်း ခေါင်းမှာ တေ့လိုက်ပါတယ်….. ပြီးတော့ ချောနေတဲ့ လမ်းအတိုင်း အသာထိုးသွင်းလိုက်ပါရှင်……****ဟာ နဲနဲတော့ ကြပ်ကြပ်လေး ဝင်သွားလို့ နာသွားပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဆောင့်အားကောင်းလာတော့အကျင့်ရပြီး ကောင်းလာပါတယ်…….ပြွတ်…… ပြွတ်…… ပြွတ်…… ဒုတ်… အင့်…. ဒုတ်…. အမေ့ပြွတ်…… ပြွတ်…… စွတ်ဒုတ်…. အား… အင်း… ဒုတ်…. အီး ပြွတ်…… ပြွတ်…… ဦး….ကျမတော့ ကောင်းလွန်းသောကြောင့် သူ့ခါးကို လှမ်းဖက်ပြီး ညောင့်တိုင်း ဆွဲဆွဲဆောင့်နေမိပါသည်။
အားရပါးရပေါ့ … ပစ္စည်းကသားအိမ်ကို မညှာမတာ ဆောင့်နေတော့ သားအိမ်တစ်ခုလုံး နာကျင်လာပါတယ်။****စေ့ကလေးလဲ ပွတ်တိုက်ဖန်များလို့ နီရဲယောင်ရမ်းလာပါတော့တယ်။(15) မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျမ ဒုတိယအကြိမ် ပြီးသွားပါတယ်…… ကျမလဲ အရည်တွေထွက်ရောသူလဲ ဆက်မဆောင့်နိုင်တော့ပဲ ကျမနို့တွေကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပစ္စည်း ထဲ သုတ်တွေ ပန်းချလိုက်ပါတယ်အိုး… ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာ.. ကျမက သူ့ခါးကို ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ ချိတ်ပြီး ငါးမိနစ်လောက် ဖက်ထားလိုက်တယ်”ကဲ…. သမီး ပြန်ကြစို့…. သိပ်ကြာယင်… အိမ်ကစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်..”ကျမ ဘာမှမပြောပါဘူး….. ကျမရဲ့ ရမ္မက် ပြေငြိမ်းတော့မှ ဒီလူကြီးကိုသတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် မုန်းနေမိတယ် ဒါနဲ့ ရေချိုးခန်းမှာသာမန်ကိုယ်လက်ဆေးကြောပြီး အဝတ်လဲလိုက်ပါတယ်…. သူလဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ”သမီး ဒီနေ့ မုန့်ဖိုး ဘယ်လောက်ရလဲ”ကျမတို့ လမ်းတစ်ဝက် အိမ်အပြန်မှာ သူက စပ်စုလိုက်ပါတယ်”တစ်ထောင်ပဲ ရပါတယ်””အိုး…. မနဲပါလား”ကျမ မုန်းလက်စရှိတဲ့ ဒီလူကြီးကို မျက်စောင်းထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်….
ကျမ သူငယ်ချင်းတချို့တစ်နေ့ ငါးထောင်ခြောက်ထောင် ရတာသိရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။”ရော့… ဦးသမီးကို မုန့်ဖိုးပေးတာ”သူပေးတဲ့ပိုက်ဆံကို အသာစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ထောင်တန်ငါး ရွက်ပါအဲဒါကိုပဲ အင်မတန် စွန့်လွှတ်မှုကြီး လုပ်တဲ့ပုံနဲ့ ပေးနေရှာပါတယ်။”အိုး….. ကျမ မယူပါရစေနဲ့ ကျမ တစိမ်းတွေဆီက ပိုက်ဆံ မယူတတ်လို့ပါ”ကျမက ကျိတ်မှိတ်ပြီး စကားလှအောင် ပြောလိုက်ပေမယ့်…..” အိုး…… ဦးက တစိမ်းမှမဟုတ်တာ… ယူပါသမီးရယ်…. လိမ္မာပါတယ်…. ရော့….. ရော့……ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျမရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကြားထဲကို ထိုးသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာ ဒီငနဲကို ဘယ်လိုပညာပေးရမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်….ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လွှတ်လိုက်တဲ့ ဖေဖေ့ မျက်နှာတောင် မထောက်ဘဲ ကျမကို မုဒိန်းသမားဆံဆံလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအရာရှိမင်းကို ဘယ်လို ပညာပေးရမလဲ။
ကျမ မေ့ကနဲဖြစ်သွားချိန်မှာ ကားရပ်သွားပါတယ်။ ဟွန်းသံ တစ်ချက်ပေးလိုက်တော့ ရိုစီလေးပြေးထွက်လာပါတယ်….. ကလေးလဲမဟုတ် လူကြီးလဲမကျသေးပဲ ရိုစီဟာ ကျမဘေးမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း“မမတို့ကလဲ ကြာလိုက်တာ…..””အလုပ်များနေလို့ပါ သမီးလေးရယ်””ဒယ်ဒီကတော့ ဒီလိုပဲ အလုပ်များတယ် များတယ်နဲ့ ရိုစီနားကို ကပ်တယ်ကိုမရှိဘူး””နောက်ဆို သမီးလေးက ဒယ်ဒီကို ချစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်……အချိန်တန်ယင် ဒယ်ဒီတို့နဲ့ ခွဲသွားမှာပါ…””ဟင်…. ဒယ်ဒီ ဒီလိုမပြောပါနဲ့….. သမီးပါလိုက်မယ်…””ငိုတော့ မငိုပါနဲ့ဗျာ”သူတို့သားအဖက ကျမကိုတောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ အချစ်နလံထနေကြပါတယ်…
.ဒါကိုကြည့်ပြီး ဦးမြင့်စိုးတစ်ယောက် သူ့သမီးကိုတော့ အတော်ချစ်သားပဲလို့ မှတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်..အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျမတို့ အိပ်ချင်လိုက်ပေမယ့် ရိုစီကလေးက ကျမကိုအပြင်လိုက်ပို့ဖို့ ပူစာတာနဲ့ လမ်းထိပ်ဖက်ထွက်ရပါသေးတယ်……ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက်နဲ့ ည (၇) နာရီ ထိုးသွားလို့ အိမ်ပြန် ထမင်းစားပြီးအိပ်ယာ ဝင်ခဲ့ပါတယ် ရိုစီဟာ ကျမကို ခင်နေပြီမို့ ကျမဘေးမှာ အတင်လာအိပ်ပါတယ်..ကျမတို့ မိန်းကလေးချည်းပဲဆိုတော့ အိုက်ကလဲ အိုက်တာနဲ့ ထဘီရင်လျားတွေနဲ့အိပ်ယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အခန်းမီးကို ပိတ်လိုက်တာနဲ့ လပြည့်ညရဲ့ လရောင်ဟာတစ်ခန်းလုံးအေးချမ်းစွာနဲ့ ထိန်လင်းနေစေပါတယ်။ဟိုလူးဒီလှိမ့်နဲ့ ကျမရဲ့ ပေါင်တွေဟာ ရိုစီပေါင်ပေါ်သွားတင်မိတာနဲ့ ရိုစီဟာ ကျမဖက်လှည့်လာပါတယ်လရောင်အောက်မှာ ရိုစီဟာ နတ်သမီးလေးလို လှနေပါတယ် ကျမလဲ မနေနိုင်တော့ပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်း ထူထူလေးတွေကို ယုယုယယ စုပ်လိုက်မိတယ်…..
ရိုစီဟာတစ်ဆက်ဆက်တုန်လာသလို ကျမကိုသွယ်ပြောင်းတဲ့လက်ကလေးတွေနဲ. ပွတ်သတ်လာပါတယ် ။ကျမရဲ. ရမ္မက်စိတ်လဲ ထလာပြီမို. သူ.ရဲ.ထဘီရင်ရှားကလေးကို အသာဖြေချလိုက်ပါတယ် …ရှောက်ချိုသီးခြမ်းကြီးတင်ထားသလို မို.မို.လေးကြွနေတဲ့ ရင်သားအစုံဟာ ကျမရဲ.ရင်ကို ပူလောင်စေပါတယ် အသာလေးလက်ဝါးတင်ပြီး တစ်ဖြစ်ဖြစ် ညစ်ပေးလိုက်မိတယ် ။….ကျမရဲ.လျှာ ဟာသူရဲ.လျှာနုနုလေးကို စုတ်လိုက် အာခေါင်တစ်ရှောက် လျောတိုက်လိုက်နဲ. ရိုစီအသက်ရှုနုန်းကို ပြင်းထန်စေပါတယ် ကျမကိုလဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖက်ထားတယ် ကောင်မလေးကအသက်၁၅ နှစ်ကျော်ဘဲရှိသေးတော့ ဒီစိတ်တွေလုံးဝမရှိသေးပါဘူး …
ဒါပေမယ့်မိန်းမတို.ရဲ.မူလဗီဇ စိတ်ဟာ အခုတော့နိုးကြားစပြုနေပြီမို. သူ.တစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ရှားနေပါတယ် ကျမရဲ. လက်တွေဟာ သူ.နို.သီးတွေထဲက သာကူစေ့လိုအစေ.လေးတွေကို တထုတ်ထုတ်မြည်အောင်ခြေ ပေးနေပါတယ်။….“အမမ …မမ ..နာတယ်…ဖြည်းဖြည်းလုပ်”“ကောင်းလား….ရိုစီ”“အင်း….ကောင်းတယ်”“ဒီထက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးရမလား”“အင်း…လုပ်ပေးပေါ့”သူ.နုတ်ခမ်းကနေခွာထားတဲ့ ကျမဟာသူ.နို.တွေကို အသာငုံ.စို.ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်တဖက်ကလဲ ထမီကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းခွာချရင်းဆီးခုံလေးကို ပွတ်သတ်ပေးနေမိတယ် ဆီးခုံလေးမှာ လရောင်အောက်မှာအမွှေးမရှိဘဲ ပြောင်ချောချောလေးပေါ်လာပါတယ်။….“ရိုစီ တစ်ခါတစ်လေ စောင်ခေါင်းထဲမှာမရားဘူးလား”“တစ်ခါတစ်လေမှပါ မမကလဲ ဘာတွေရှောက်မေးနေတာလဲ”“ညီမခြင်းဘဲကွာ ”
“အပျိုမဖြစ်ချင်ဘူးလား”“အင် ဂျက်ရှင်းထိုးပေးမယ်လေ”“ဟင်း…ကြောက်စရာကြီး”“ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကွဲ. စွဲမက်စရာပါ”“မိန်းမတိုင်း အင်ဂျက်ရှင်း မထိုးခံရင် လူလို.မခေါ်ထိုက်ဘူး”“ဒါဆိုရိုစီ လဲအထိုးခံရမှာပေါ့နော်..”“အင်း..အခုအမ အင်ဂျက်ရှင်းထိုးတဲ့ပုံစံ လုပ်ပြမယ်”ကျမဟာ ကောင်မလေးကို စကားနဲ.အာရုံလွဲရင်း စောက်ဖုတ်လေးကို အသာပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်……..အင်မတန်နုညံတဲ့အမွှေးတွေကြောင့် ကတ္တီဘာကို ပွတ်ရသလိုပါဘဲ။…..သူ.နို.တွေဟာအထိုက်ရှောက်မာတောင်လာပါတယ်..ကျမနုတ်ခမ်းကိုခွာလိုက်ပါတယ်နဂိုထက်ပိုပြီး ဖေါင်ကားလာတဲ့ နို.တွေကိုကြည့်ရင်းရိုစီ ဟာတအံတသြငုံ.ကြည့်နေပါတယ်။။။။….
“မမ ရိုစီ….နို.တွေ”“အေး…ဒါမှရိုစီကျောင်းမှာ အလှဆုံးဖြစ်မှာ”“တကယ်…..”“မယုံရင် စောင့်ကြည့်ပေါ့…”“ကဲ ရိုစီ ပေါင်ကားထားပေး….မမအင်းဂျက်ရှင်းထိုးတဲ့ ပုံစံပြမယ်”အသာဖြဲချလိုက်တဲ့ ရိုစိ ပေါင်ခွကြားဟာ ကျမတို.ရဲ.နုပ်ခမ်းနှစ်လွှာ ခပ်ဟဟ ထားသလောက်ဘဲရှိပါတယ်။။….လရောင်အောက်မှာ ပန်းနုရောင်နုတ်ခမ်းသားတွေက…မရမ်းစေ.ရောင် အစေ.လေးကို ဝိုင်းပတ်ထားပါတယ်…အစေ့လေးဟာ အတော်ကြီးပါတယ် လက်သန်းနှစ်ဆစ် နီးပါးပါဘဲ ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲ နှခေါင်းငုံ.လိုက်တော့….။“အိုး….မမ….ဘာလုပ်မလို.လဲ”“ညီမ စောင်ခေါင်းထဲ အင်ဂျက်ရှင်း ဝင်လွယ်အောင်လုပ် မလို.”ဒီတော့မှငြိမ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးစောက်ခေါင်းထဲ ကျမရဲ.ရှာကို ထိုးထဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ……..“အိုး….မမ….မ…အမလေး…ရိုစီမနေတက်တော့ဘူး …အား…အား…အား…မမ ..အ…အမလေး..ရိုစီသေတော့မယ်…”ကျမရဲ.ရှာဟာ ရိုစီ ပစ္စည်းထဲမှာမွှေချင်တိုင်း မွှေနေမိတယ် ….အဓိက အားဖြင့်တော့ အစေ.လေးကို မညှာမတာ ရက်လိုက် စုတ်လိုက်နဲ. လုပ်ပေးပါတယ်…..။
ရိုစီဟာ ကုတင်ပေါ်မှာဆောက်တည် ရာမရဘဲ တွန်.လိမ်ကောင်ကွေးနေပါတယ် ဖင်လေးဟာကော့တက်လာသလို ပေါင်တွေလဲ ကားလိုက်စေ.လိုက်နဲ.သူကိုယ်တိုင် မသိဘဲနဲ.ရမ္မက်တွေ ထလာပါပြီ….စောက်စေ့ကလေးဟာတဖြည်းဖြည်း မာလာပြီး လျှာနဲ.ပွတ်လိုက်တိုင်း ရော်ဘာချောင်းလေး လိုဘယ်ညာယိမ်းနေပါတယ် ။…..ရိုစီ စောက်ခေါင်းထဲက ကျမမြင်ဖူးသမျှထဲ မှအရည်တွေထဲမှာအပြစ်ဆုံးအရည်တွေ တလိမ့်လိမ့်နဲ. စီးကျလာပါတယ်….ကျမခေါင်းကို သူ.စောက်ဖုတ်ထဲ ဖိတွန်းထားပြီး ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်သူ.ရဲ.အရည်တွေကတော့ ကျမဝမ်းထဲရောက် ကုန်တာပါဘဲရှင်။……ရိုစီ ကိုထိုးဖို.ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလိုက်ရှာတော့ အခန်းထဲမှာ ဘာမှမတွေ.ပါဘူး ။..
အခန်းပြင်ထွက်ရှာတော့နောက်ဆုံး နောက်ဖေးစကောထဲမှာထဲ့ထားတဲ့ရုံးပတေသီးတွေတွေ.လိုက်ရပါတယ် …..ကြံရာမရတာနဲ. အဲဒီထဲက အကြီးဆုံးရွေးယူပြီး သေချာရေဆေးလိုက်ပါတယ် ..အသီးကအတော်ရင့်နေပြီမို. အစိမ်းရင့်ရောင်သန်းနေပါတယ်….အသီးတစ်ခုလုံးနေရာလွတ်မရှိအောင် အမွှေးနုတွေနဲ.ပြည့်နေပါတယ်…….။ရုံးပတေသီး ကိုကြည့်ပြီး ကျမအတော်ကျေနပ်သွားတယ် ခရမ်းသီးသာသုံးကြတာ ရုံးပတေသီးသုံးတဲ့ ကျမဟာ လိင်ပညာကို တစ်ခတ်သစ်စေသူမဟုတ်ပါလား။“ညီမလေး…ဒီမှာကြည့် အင်ဂျက်ရှင်ဆိုတာ ဒီလိုပုံစံဘဲ…”“ဟင်…ဒါရုံးပတေသီးဘဲ..”“အေး ဒါနဲ.ပထမ စမ်းမယ်…နောက်သဘောကျရင် အင်ဂျက်ရှင်းအစစ်နဲ.လုပ်မယ်”ကျမဟာပြောပြာဆိုဆို သူမရဲ.ဒူနှစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီး ဒကောင်ကွေးကနေဆွဲထားခိုင်းလိုက်ပါတယ် ဒီတော့မှအရည်တွေနဲ.တင်းပြောင်နေတဲ့ပန်းနုရောင်အသားနုလေးတွေဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာပါတယ် ။
….စောင်ခေါင်းတစ်ရှောက် ရုံးပတေသီးနဲ. အလျားလိုက် ပါတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ …..“အိုး…မမ..မမ….အင်ဂျက်ရှင်းကိုအပေါက်ထဲ ထည့်လိုက်ပါ …ကျမအထဲ မှာယားနေပြီ…”“အိုး…ညီမလေးကလဲ ခဏစောင့်အုံး ….သေချာအပြင်မှာစမ်းပြီးမှအထဲ ထည့်ရတာ”“ဟင့်အင်း….ဟင့်အင်း…..အခုတည့်မထဲ့ရင်ရိုစီအော်လိုက်မှာနော်….ဒီမှာသေတော့မယ်…”ဒါနဲ.ရုံးပတေသီးကို စောင်ခေါင်းကျဉ်းလေးထဲ အသာနှစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။….“ဗြွတ်….အမေ့…အား…မမ…အခုမှပိုဆိုးလာပြီ…..ကျမဗိုက်ထဲမှာယားနေတယ်….အား…..အမလေး…မမ..အင့်…အား…အား…အ..အ…အ…အိုး…..အမလေး…အား…အား….”ကျမရဲ.လှည့်ပတ်မွှေနောက်ပြီး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပေးမှုကြောင့် ရိုစီ အတွင်းသားတွေဟာ ရုံးပတေးသီးကိုဖမ်းညစ်နေကြပါတယ် ….ညစ်လေ အသီးအမွှေးတွေက ရိုစီကို ရူးမတက်ရားယံစေပါတယ် ။…
.သူမရဲ.ပေါင်ဟာအစွမ်းကုန် ဇြဲထားပြီး အထဲအသီးမရောက်ရောက်အောင် ကော့ကော့ပေးနေပါတယ်အသီးကို အရင်းမြုတ်တဲ့အထိစောင့်ချလိုက်တာနဲ. အားကနဲ အော်ရင်း ဖြူပြစ်ပြစ် အရည်တွေကို ပန်းချလိုက်ပါတယ် ။။။။။။။။။စောက်ခေါင်းထဲမှာ ညှပ်နေတဲ့အသီးကို လဲ ပေါင်နဲ.ညှပ်ပြီး ဘယ်ညာလူးလိမ့်နေပါသေးတယ် ..မတော်အသီးစောက်ခေါင်းထဲကြိုးကျန်ခဲ့ရင်ဒုက္ခ။။။။ခဏနေတော့ ရိုစီမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီး ကျမကို ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြပါတယ်။……“ကောင်းလားရိုစီ..”“အင်း..”“အင်ဂျက်ရှင်းအစစ်ဆိုဒီ ထက်ပိုကောင်းတယ်..”“မမ ဘယ်နှစ်ခါခံဘူးလဲ…”“ခဏခဏ ဘဲ..သိပ်ကောင်းတာကိုး…ရိုစီ တစ်ခါခံဘူးရင်နောက်တစ်ခါခံချင်လာတယ်”“ဟုတ်တယ်နော်”“ကဲ…မမကိုတစ်လှည့်လုပ်ပေး အုံး….”“ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ…မမရဲ.”“ပထမ မမနို.တွေကို ဆို.ပေးရမယ်..”ပြောပြောဆိုဆို ကျမ ထဘီ ကိုချွတ်လိုက်တော့“မမ က..လှတယ်နော်..”
“အေး…အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ အင်ဂျက်ရှင်းထိုးရင်လှတယ်လို. ….”ရိုစီဟာကျမနိုတွေကို မစို.တက်စို.တက်နဲ. စို.ပေးနေပေမယ့် ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။“အေး…ဟုတ်ပြီ..လျှာလေးနဲ.ယက်…အင်း…သွားနဲ.မနာအောင်ကိုက်အုံး …ဟုတ်တယ်….အိုး….ကောင်းတယ်ရိုစီ လေးရယ်…”ကျမ သူရဲ.နိုဆို. ပုံကိုတော်တော်ကြိုက်သွားပါတယ်.…ကလေးတစ်ယောက်ဆို.ပုံမျိုးပေမယ့် ကျမရမ္မက် ကို နိုးဆွနိုင်ပါတယ်…။“ကဲ…အခုနက ရိုစီပစ္စည်းကိုမမ လုပ်ပေးသလိုလုပ်ပေးအုံး”“အေး…ဟုတ်ပြီ…နေနေ…ပေါင်ဖြဲပေးမယ်..”“ဟုတ်ပြီ….ပထမ အစေ့လေးကိုတွေ.လား လျှာလေးနဲ.အသာကလိပေး ရိုစီ ရေခဲချောင်းယက်ရင်ယက်သလိုလေး…အေး..အေး…ကောင်းတယ်…အေးဟုတ်တယ်…အ…အ….”
“ကောင်းလိုက်တာရိုစီ ရယ် ….အား….ကျွတ်……ကျွတ်….ကျွတ်….အမလေး ကောင်းတယ်ကွယ်…”“အခေါင်းလထဲ လျှာထည့်အုံး ….အေး…မွှေပေး..ဟုတ်ပီ…အဲဒီနားမှာနာနာမွှေ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ…..”ကျမ အရည်တွေဆင်းလာတော့ ရိုစီခေါင်းကို ဖိထားမိတယ် …..မတော်လို.အရည်တွေကို ထွေးထုတ်ရင် အလဟသတ် ဖြစ်သွားမှာဆိုးလို.ပါ…..နောက်နှစ်မိနစ်လောက်လဲ ရှိရော ….။။။။။။“ကောင်းလားရိုစီ..”“မကောင်းဘူး ..ငန်ကျိကျိနဲ. ..”“ကဲ ကဲ ….ဟိုအင်ဂျက်ရှင်းအတုယူလိုက်အုံး..”“ဟဲ့….အို…ဖြေးဖြေးထဲ့ရတယ် ဟဲ့….အား…..မွှေပေးဟုတ်ပီ စောက်စေ့ကိုလဲအဲဒါနဲ. စောင်းပြီးပွတ်ပေး…အ..အ..လားလား…ကောင်းလိုက်တာ….ရိုစီရယ် လုပ်လုပ်…ဆောင့်ပေး….အေး…အတင်းစောင့်လေ…အ..အ..အင်း…အား…အမလေးကျွတ်ကျွတ်…အိုး..ဟုတ်တယ် …အိုး…ကောင်းတယ်…ပြီးပြီ.…ပြီးပြီ….အားးးးးးးးးးးးးးးးးးး….”ကျမကတော့ ကောင်းလွန်းလို. တကိုယ်လုံးရိုက်ထားသလိုဖြစ်ပြီး….ပြီးပြိဆိုတာနဲ.အိပ်ချလိုက်ပါတယ်……..။။။။။။
“အင်း…ညကရိုစီ အိပ်ရရဲ.လား…”“သေတာကျနေတာဘဲ မမကိုလဲ လုပ်ပေးပြီးရော မမဘေးမှာဒီတိုင်းဝင်အိပ်လိုက်တာဘဲ..”ဟုတ်ပါတယ် ကျမတို.နှစ်ယောက်လုံးကိုယ်တုံးလုံးဘဲ အိပ်ခဲ့ကြတယ်…..ရိုစီလေးက ချစ်စရာအလင်းရောင်အောက်မှာလှချင်တိုင်းလှနေပါတယ်……….။။။။“အင်ဂျက်ရှင်း..အထိုးခံချင်သေးလား”“ခံချင်တာပေါ့…”“ဒါဆိုမနက်စာစားပြီး သွားထိုးမယ်…အဆင်သင့်လုပ်ထား.…”ကျမလဲ သူ.ကိုပြောပြီး အဝတ် ဝတ်ပြီး ရေချိုးခန်းဘက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်….………..
လုပ်စရာရှိတာတွေ မြန်မြန်လုပ်ပြီး မြင့်မောင်ဆီကျမတို.လာမယ့်အကြောင်း နဲ. ကျမရဲ.ကိစ္စကိုပြောလိုက်ပါတယ်….သူကသူ.သူငယ်ချင်းအိမ်ကိုချိန်းတယ်…နေ.လည်စာစားပြီးတာနဲ. လစ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် အိမ်ကိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပြောခဲ့တယ် ူမြင့်မောင်ပြောတဲ့ အိမ်ကိုတော်တော်ရှာယူရတယ်…..ရောက်ရောက်ခြင်ဘဲ….“မောင်မောင် ဘော်ဒါရော..”“အထဲဝင်စို. ကိစ္စလေးတွေရှိသေးတယ် ..”“အံမာ…သူကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်..”အခန်းထဲရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ မြင့်မောင် ဟာအဝတ်အစားတွေချွတ်ပါတယ်“ရိုစီ …အဝတ်တွေချွတ်လိုက် ..”“ဟင် ..ရိုစီရှက်တယ်..”“ဟဲ့ အင်ဂျက်ရှင်းထိုးချင်တယ်ဆို…ခုကျတော့တမျိုး…”“ယောင်္ကျားရှေ.မှာဘယ်လိုထိုးမလဲ..”
“ယောင်္ကျားမှ အင်ဂျက်ရှင်း ထိုးတက်တာဟဲ့..”ဒါနဲ.သူအဝတ်တွေကို တုန်တုန်ရီရီနဲ.ချွတ်နေပါတယ် စပ်စမိုင်ဒါတော့မချွတ်နိုင်တော့လို.ကျမဘဲ ချွတ်ပေးလိုက်ရတယ်..။“ကဲ ကိုယ့်ကုတင်ပေါ်သွားအိပ်…”ကျမကိုယ်တိုင်အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်ပါတယ်…မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးအိပ်နေတဲ့ရိုစီ ကို ကျမနဲ မြင့်မောင်လက်တွဲလျောက်သွားပြီး ခိုးကြည့်မိတယ် …..“ချာတိတ်မကရည်ဘဲ..”“အမှန်အကန် ပါကင်ပိတ်လေး တစ်ခုပြောထားမယ် သူ.ကို လေးငါးခေါက်လုပ်ပေးမယ်ဒီနေ.မေသူ.ကိုလုံး၀ မထဲ့ရဘူး”“ဘာလို.လဲ ..”“ကိစ္စရှိလို.”“ကောင်းပြီလေ..”သူဟာပြောပြောဆိုဆို သူပစ္စည်းကို မေသူ.နုတ်ခမ်းမှာတေ့လိုက်တော့။.………..“မမ…မမ…ဒီမှာကြည့်ပါအုံး..”
“ရိုစီ..စကားမပြောနဲ.သူခိုင်းတာလုပ်” ဟောက်လိုက်မှငြိမ်သွားတယ်..“ရိုစီ မင်းပါးစပ်က ကိုယ်ပစ္စည်းကို အုံးမွေးလုံးလို စုတ်သလိုစုတ်စမ်း ”“အေးအေး …အ..အ..အင်း အားမနာနဲ.စုပ်ပေး ..နာနာစုပ် ထိပ်ဖျားကအသားနုကို လျှာနဲ.ပွတ်ဆွဲပေး”“ဟုတ်ပြီ အင်းးး ကောင်းလိုက်တာ…အင်းအင်း စုပ် လက်တစ်ဖက်က လချောင်းကို ကိုင်လိုက်အုံး”“အေး…ဟုတ်ပြီ…ရော့ ဒီလိုရှေ.တိုးနောက်ဆုတ်လုပ် ဟား..သိပ်ကောင်းတယ်ကွာ…”မြင့်မောင် ဟာစုပ်နည်းလက်တွေ.ပြနေလေရဲ.ရိုစီ ကလဲတထွာပြရင် တစ်တောင်မြင်တယ် ….မြင့်မောင် ရိုစီကိုလီးစုပ်ခိုင်းနေချိန်မှာ ကျမလဲ အားနေတာနဲ. ရိုစီပေါင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးကို ဖြဲချလိုက်တယ် နေ.လည်အလင်းရောင်အောက်မှာရိုစီ ဟာနေ.လည်ကထက်ပိုလှနေပါတယ် ကျမလဲကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ. စောက်ဖုတ်လေးကို စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်လိုက်မိတယ် ။
စောက်ဖုတ်အတွင်းသားကမခြောင်တစ်ခြောက်မို. ပလပ်စတစ်နှစ်လွှာလိုစေ့ကပ်နေပါတယ် စောက်စေ့လေးက အကွဲကြောင်းလေးထဲက နေတိုးထွက်နေတယ်လက်မ နှစ်ချောင်းနဲ.အသာခွဲလိုက်တော့ ဟသွားပြီး နှင်းဆီဖူးလေးလိုဘဲ ကျမလဲ တဖျင်းဖျင်းနဲ.စုပ်ယူနေမိပါတယ် …..ကျမလျှာဟာ အထဲမှာရှာဖွေရေးခရီးထွက်တော့တာဘဲ စောက်စေ့ကိုဘော်ဒီတိုက်လိုက်တိုင်း ကော့တက်တက်လာပါတယ်…ပါးစပ်ထဲငုံထားတဲ့ မြင့်မောင် လီကို ပိုပြီးရမ္မက်ပြင်းပြင်းစုပ်ယူနေပါတယ် မြင့်မောင်ကလဲ နုတ်ကအသံမျိုးစုံထွက်လို.နေတယ်.…..ကောင်မလေူနို.ကိုလဲ ဆုပ်ချေပေးနေလေရဲ. ကျမယက်နေလို. ၁၅ မိနစ်တောင်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ ၃ ခါတောင်ပြီးသွားပြီ…..သုတ်ရည်တွေကနည်းနည်းတော့ ညှီပါတယ်
ဒါပေမယ့်မျိုချလိုက်တယ် ကြိုက်တာကိုး…မောင်မောင်ကတော့ နိုနှစ်လုံးကိုကိုင်ဆွဲရင်း ကောင်မလေးပါစပ်ကို အတင်းထုတ်လိုင်သွင်းလိုက်တွယ်နေပါတယ် ကောင်မလေးဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူးဘေးကကျမ တောင်နာချင်လာတယ်…ရိုစီ နို.တွေကို ပိပြားသွားအောင်ဖိတွန်းညစ်ပြီး ခါးကကော့တက်လာသလိုပါးစပ်ကလဲဗလုံးဗထွေးနဲ.အော်လိုက်ပါတယ် မောင်မောင်ပြီးသွားပြီပေါ့သုတ်ရည်တွေ ဘယ်လောက်ထွက်တယ်မသိဘူး ရိုစီ ပါးစပ်ထောင့် တွေကနေစီးကျလာပါတယ်….လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ပျွတ်ကနဲကျွတ်လာပြီး ရမ်းတမ်းရမ်းတမ်းဖြစ်နေပြီးသုတ်ရည်တွေရော တံတွေးတွေရော ရိုစီ မျက်နှာပေါ်အနှံကျသွားပါတော့တယ် …
ရိုစီ ဟာမောမောနဲ.အိပ်နေတာမို. ကျမကဘဲတက်သလောက် မှတ်သလောက် မြင့်မောင်လီးကို ပြန်ဆွပေးနေရတယ်ခဏကြာတော့လီးဟာခေါင်းတစန်.စန်.ထောင်လာပါတယ် ရိုစီ ဖင်အောက်မှာခေါင်းအုံးတစ်လုံးခံပြီး မြင့်မောင်ကိုနေရာယူဖို.မျက်ရိပ်ပြလိုက်တယ်…ကျမ ကိုယ်တိုင်ရိုစီ မျက်နှာတည့်တည့်မှာ မြင့်မောင်ဘက်မျက်နှာလှည့်ထိုင်လိုက်တယ် …မြင့်မောင် ဒစ်တုတတ်တုတ်ကြီးဝင်ရင် ရိုစီ အသေအော်မှဘဲလေကျမ စောက်ဖုတ်နဲ.ပါးစပ်ပိတ်ထားရမယ် လေ“ကဲ မြင့်မောင် စကြစို.”“ရယ်ဒီဘဲ အသဲလေး..”မြင့်မောင် ဟာရိုစီ ခြေထောက်တွေကို ခြေချင်းဘက်ကနေကိုင်ပြီး မြောက်ဖြဲလိုက်ပါတယ်….ရိုစီ အ၀ ကျဉ်းတဲ့နေရာမှာခက်နေတာမို. ကျမရိုစီ မျက်နှာပေါ်ကနေ ကုန်းပြီး မြင့်မောင်လီးကို ရိုစီ အဝနဲ.တေ့ပေးလိုက်တယ်….“ဗြစ်..ဗြစ်…ဗြစိ…..ဖေါက်.…ဒုတ်..အ..အ..အ.”“အားးး
အမေ့ သေပါပြီ အီး ဟီးးးဟီးးးး ဟင့်ဟင့် အ..အ…အ…သေပါပြီ မမရယ်…”မြင့်မောင်က ဆွတောင်မဆွဘဲ ချွဲကျိနေတဲ့အခေါင်းထဲ ကို လီးကို တရှိန်ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ် …ခြေက်နေရင်တွန်းကန်လုပ်ရှားနိုင်တယ်အခုချွဲနေတော့ ရုန်ဖို.အချိန်မရတော့ဘဲ လီးဟာဒါရိုက် စောက်ဖုတ်ထဲဝင်ပြီး အပျိုမှေးကို ဖေါက် သားအိမ်းကို သွားထောက်တာပေါ့ …ရိုစီ ခမျာ အသေအော်ရင် ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်…..ကျမလဲ အဲဒီတော့မှသတိဝင် လာပြီး သူ.ပါးစပ်ထဲစောက်ဖုတ်ကိုတေ့ပေးလိုက်တယ်….တစ်ချက်ချက်အရှိုက်မှာ စောက်ဖုတ်ကိုစုပ်သလိုဖြစ်ပြီး အရသာရှိလှပါတယ်…..မြင့်မောင်ဟာ ရိုစီ ရဲ.ခြေထောက်တွေကိုသူ.ပေါင်မှာ ချိတ်တင်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လပ်နေပါတယ်…လီ သွင်းလိုက်တိုင်းစောက်ဖုတ်လေးဟာ ချိုင့်ဝင်သွားပြီး ပြန်ထုတ်ရင်အုံကြွလာတာမို. အင်မတန်ကြည့်ကောင်းပါတယ်…
.ကျမလက်တွေကလဲ ရိုစီ နို.တွေကို လှမ်းကိုင်ပြီ ီးချေမွနေပါတယ် သူ.အဖေလဲ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလေ…….မြင့်မောင် လီးတစ်ခုလုံးဟာရိုစီ စောက်ဖုတ်ထဲကသွေးတွေကြောင့် နီရဲပြောင်လက်နေပါတယ် ….ရိုစီ တင်ပါးတစ်ဝိုက်နဲ. ကုတင်ပေါ်မှာလဲသွေးတွေကမြင်မကောင်းအောင်ပါဘဲ…..မြင့်မောင်လီး ရိုစီ စောက်ဖုတ်ထဲကို မနားတမ်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တာ ၅မိနစ်လောက်ကြာရော ရိုစီ ဟာအရသာတွေ.လာပုံရတယ် ..သူကိုယ်တိုင်စောင့်ချက်နဲ.အညီ ကော့ကော့ပေးလာတယ်…မြင့်မောင်ရဲ.စုပ်နယ်မှုကြောင့် ကျမနို.တွေတင်းမာလာပါတယ် မြင့်မောင်လီးဟာတဖြည်းဖြည်းမီးရထားလိုဘဲမြန်မြန်လာပါတော့ တယ် …
.ရိုစီလဲ အငြိမ်မနေပါဘူး ပေါင်ကိုကားလိုက်စိလိုက်နဲ. အစွမ်းကုန်အရသာယူနေပါတယ်…ရိုစီ ဟာတစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်သလို တုန်နေပြီး ပေါင်ကိုအစွမ်းကုန် ဖြဲပြီးတော့ သူမရဲ. အထွဋ် အထိပ် ကိုသွားပါတော့တယ်….“အား…. အမေ့…. အိုး…. မမ…. .မမ…. ရိုစီ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်း မသိဘူး…. သေတော့… မယ်…. ထင်တယ်… အိုး….အိုး…အားကျမလဲ သူနဲ့ တပြိုင်ထဲဘဲ ပြီးသွားလို့ ဖြူပြစ်ပြစ် အရည်တွေဟာ ရိုစီမျက်နှာပေါ် ခွက်ထဲကနေ လောင်းချသလို တပွက်ပွက် ကျလာပေါ့တယ်။ crd